Mpamatsy sy mpanamboatra scarf - Mpanamboatra scarf any Sina
Rehefa mitafy fehiloha, fikolokoloana malefaka sy malefaka amin'ny hoditra ianao dia avelao ianao hahazo aina mandritra ny andro. 100% landy nampidirina habe: 35 ″ x 35 ″ / 86cm x 86cm, toradroa, haben'ny taila. Fitaovana: landy mulbera 100%, satin tsotra, 12mm, 14mm, 16mm, lanja maivana, malefaka ary mifandray amin'ny hoditra. Volavola: Volavola am-pahendrena sy lamina vita pirinty am-pitandremana (fanontana amin'ny lafiny iray), lamina tsara tarehy mahafinaritra sy kanto. Fonosana boaty fanomezana. Mety: Square bandana ...
Saripika landy vita amin'ny landy vita amin'ny landy an'ny vehivavy
Volom-bolo vita amin'ny landy vita amin'ny landy
Volom-bolo vita amin'ny landy vita printy nomerika an'ny vehivavy
Saripika vita amin'ny landy vita amin'ny landy
Saron-doha volon'ondry lafo vidy
Sarondry lava vita amin'ny landy